Ramaroson Thierry: Manentana ny vahoaka hanana fitiavan-tanindrazana ara-toekarena
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Ramaroson Thierry: Manentana ny vahoaka hanana fitiavan-tanindrazana ara-toekarena
Rechercher Valider	Ramaroson Thierry: Manentana ny vahoaka hanana fitiavan-tanindrazana ara-toekarena	Imprimer	Taratasim-bola na « chèque » misy sora-bola 2.444.900 ariary omaly no natolotry ny orin’asa mpanao savony « Savonnerie Tropicale » ny Vokovoko Mena malagasy. Ny tale jeneralin’ity orin’asa malagasy ity, Ramaroson Thierre, no nanolotra izany ary ny filoha nasionalmin’ny Vokovoko Mena malagasy, Rakotondranja Claude no nandray izany teny amin’ny foiben-toeran’ny « Savonnerie Tropicale » teny Ankorondrano. Io sora-bola io dia tsy inona akory fa ny Ariary 10 isaky ny baran-tsavony Nosy milanja 780grama lafo nandritra ny taona 2016. Isan-taona, nanomboka tamin’ny 2008 No nandraisan’ny « Savonnerie Tropicale » an’izao finiavana hifanome tanana amin’ny fikambanana mpanao asa sosialy « Vokovoko Mena malagasy » izao.
Nandritra izay sivy taona nanombinana ariary 10 tamin’ny vidin’ity baran-tsavony ity izay, hoy i Thierry Ramaroson, dia efa maherin’ny 25 tapitrisa ariary no natolotry ny Savonnerie Tropicale ny Vokovoko Mena mba hiatrehany ny asa iantsorohany.
Nanambara moa ny tale jeneralin’ny Savonnerie Tropicale fa « vonona hatrany ary hanampy ny ezaka efa natao hatramin’izay mba hanondrotana hatrany ny fifanoloran-tanana amin’ny asa sosialy sahanina eto amin’ny tany sy ny firenena izahay ». ?
Nomarihiny anefa fa « miankina betrsaka amin’ny fividianana na fanjifan’ny olom-pirenena ny vokatra toa itony baran-tsavony Nosy itony no hahafahana koa mampitombo hatrany ny anjara-biriky ho amin’ny asa sosialy toa izao. Izay fanjifana ny vita malagasy toy ny savony vokarin’ny « Savonnerie Tropicale » izay dia efa taratry ny fitiavan-tanindrazana ara-toekarena na « Patriotisme économique », hoy izy, ka entanina hatrany ny vahoaka mpanjifa hitana sy hanamafy izany. Etsy ankilany, tsy nafenin’ny tale jeneralin’ny « Savonnerie Tropicale » fa « fantatra tsara ny fahasahiranan’ny vahoaka mpanjifa anefa amin’izao fotoana noho ny olana ara-toekarena diavin’ny firenena, ka mety ho voatery hanjifa ny mora kokoa ny olona sasany, izay tsy hanomezana tsiny azy ireny. » Matetika , hoy ihany ity tompon’andraikitry ny orin’asa malagasy mpanao savony ity, dia ny halafon’ny vita eto an-toerana, izay tena manara-penitra raha miohatra amin’ireo vokatra toy ny savony avy any ivelany nefa tsy manara-penitra, ary mandrakotra ny tsena eto no fototr’izany.
Io olana amin’ny vokatra tsy manara-penitra sy vokatra avy any ivelany io no isan’ny notakian’i Thierry Ramaroson ny hifehezana azy mba tsy hamono ny orin’asa malagasy tena mitondra ny anjara birikiny betsaka amin’ny fampivoarana ny firenena. Matetika no ambany ny masonkarenan’ireny tsy manara-penitra ireny, hoy i Thierry Ramaroson, ary mitsoaka tsy mandoa hetra sy haba izy ireny. Mazava ho azy fa maivana kokoa aminy ny masonkarena, ary mora ny vidin’ny entana vokariny rehefa tonga eny an-tsena. Noho izany, isan’ny fepetra takianay mpandraharaha amin’ny fanjakana, hoy hatrany ity tale Jeneralin’ny Savonnerie Tropicale ity ny fampidinana ny haba « TVA » ho 10% dia mba mihena ny masonkarena, ary mba afaka miatrika amim-pitoniana ny fifaninanana izahay. Toraka izany koa ny fitobahan’ny entana avy any ivelany, izay ahitana vokatra tsy manara-penitra koa, ary ao dia ao koa ny vokatra miditra eto noho ny hosoka isan-karazany sy ny kolikoly ka tsy mandoa haban-tseranana, izay mahatonga ny vidin’ireny entana ireny ho mora koa raha mitaha amin’ny vita eto an-toerana. Mitaky ezaka amin’ny fitondram-panjakana koa ny momba izany, hoy ihany i Thierry Ramaroson, ary efa endriky ny fitiavan-tanindrazana ara-toekarena koa izany. Raha ny nambaran’ity tompon’andraikitra iray eo amin’ny sehatry ny fandraharahana ara-toekarena ity moa dia efa reny fa misy ny fihetsiketsehan’ny fitondram-panjakana hanangana rafitra hanara-maso ny raharaha rehetra mba hanomezana aina ny toekarena malagasy, indrindra fa ny sehatry ny fandraharahana amin’ny indostria mba tsy ho potiky ny vokatra avy any ivelany. Dia manantena ny fijoroan’izany sy ny ho fahombiazan’ny asa sahaniny ny rehetra izany.